शीघ्र स्खलन कसरी रोक्ने ? – Everest Dainik – News from Nepal
शीघ्र स्खलन कसरी रोक्ने ?
यौनसम्बन्धी कुरालाई हामी सचेत मनले मात्र गर्ने कुरा हो भन्ने मान्छौं, तर यो हामी निदाएको बेला पनि निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ । निदाएका बेला पनि लिंग उत्तेजित हुन्छ वा यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको सपना देखिन्छ । यस्तो प्राय:जसो पहिलो पटक किशोरावस्थामा हुन्छ र त्यसले व्यक्तिमा यौनको विकास राम्रौसँग भैरहेको संकेत गर्छ ।
यही क्रममा कतिपय व्यक्तिले यौन चरमसुख समेत प्राप्त गर्छन् । यसरी निदाएका बेला सपनामा यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएर वीर्य स्खलन हुनुलाई बोलीचालीको भाषामा स्वप्नदोष भनिन्छ । अंग्रेजीमा भने wet dreams, night fall वा nocturnal emmisions जस्ता शब्दको प्रयोग यही अवस्थालाई वर्णन गर्न गरिन्छ । निदाएका बेला हुने भएकाले यसलाई छोटयाउने वा लम्ब्याउने कुरा सचेत भएका बेलाजस्तो आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन ।
यौनसम्पर्क वा हस्तमैथुन अत्यधिक रूपमा लगातार गरिएको स्थितिमा पनि छाला पाच्छिएर लिंग दुख्छ । त्यसैगरी fungus को संक्रमण होस् वा एलर्जी भएर बेस्सरी चिलाएको अवस्थामा पनि लिंग पोल्ने वा दुख्ने हुन्छ । छालाका अन्य केही समस्या पनि त्यसको कारण हुन सक्छ । जननेन्द्रियको हर्पिस, अत्यधिक घर्षण, कुनै वस्तुको एलर्जी, लुतोजस्ता कतिपय स्थितिमा लिंगमा रातोपन देखिन्छ । साप्ताहिक